Edemede Sofia Wilton Martech Zone |
Edemede site na Sofia Wilton
Sofia Wilton bụ odeakụkọ site na ọrụ mana ọ na-ede obere akụkọ n'oge oge ya. A na-ebipụta akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ mpaghara ma mara nke ọma maka akụkọ ọma ya. Ọ na-edekwa blọọgụ maka Ọdọ B2B metụtara ihe ndị dị ugbu a. Dị ka onye edemede nwere mmasị, ọ na-etinye oge ọ bụla n'efu iji dee. Ọ bi na New York mana ọ na-eme njem oge ka ukwuu n'ihi ọrụ ya. Nke a na - enye ya ohere ịchọpụta ebe ọhụụ ma gụnyekwa ahụmịhe ya na akụkọ ya na - enye mmetụta dị adị.
Data Ahịa: Igodo nke Iguzo na 2021 na karịrị
N'oge ugbu a, ọ dịghị ihe ngọpụ maka ịghara ịma onye ga-ere ngwaahịa na ọrụ gị, yana ihe ndị ahịa gị chọrọ. Site na ọbịbịa nke ọdụ data azụmaahịa na teknụzụ ndị ọzọ data na-eduga, agala ụbọchị ahịa na-ezubere iche, ndị a na-achọghị, na ndị ahịa. Echiche Dị mkpirikpi N'akụkọ Tupu 1995, a na-emekarị ahịa site na ozi na mgbasa ozi. Mgbe 1995 gasịrị, na ọbịbịa nke teknụzụ email, ahịa ghọrọ obere nkọwa. Ọ